F1 Mmụta FXNUMX - Akwụkwọ Nkụzi Asụsụ Bilingual
Ndị Mmụta ọhụrụ
Ibi na Houston
Ọnụ nke Ndụ
Nri & Obi .tọ
Kaadị Metro Q
Ozi mbata na ọpụpụ
Omume iji melite I-20
Usoro ọmụmụ zuru ezu
Inwe Ọganihu Dị Mma
Ndị na-atụ anya ya
Ọnụnọ nke ọnọdụ F-1 na ọnụnọ iwu akwadoghị
Arịrịọ & Mmelite
Ezumike Kwa Afọ
Mgbanwe nke Ego
Gbasaa I-20 gị
Mmelite Ahụike Ahụike
Tinyegharịa ọnọdụ F1
Nyefee ndekọ SEVIS
Njem / ezumike nke enweghị
Nabata na BEI!
Soro n’otu obodo zuru ụwa ọnụ nke kwadebere n'ụzọ pụrụ iche iji gboo mkpa ụmụ akwụkwọ mba ụwa.
Site na ụmụ akwụkwọ ndị na-agagharị n'ụlọ nzukọ anyị na ndị na-akụzi ha, ị ga-ahụ ọdịbendị na iche iche ebe niile na BEI. Ọbụnadị ndị ọrụ nchịkwa na-enyere gị aka ịdebanye aha gị nwere nghọta pụrụ iche banyere nsogbu ndị pụrụ iche chere ụmụ akwụkwọ anyị ihu.
Educationlọ Akwụkwọ Mmụta Asụsụ Bilingual bụ ebe iche iche na ntinye.
Obi dị anyị ezigbo ụtọ na anyị nwere ụmụ akwụkwọ, ngalaba, na ndị ọrụ na-anọchite anya ọtụtụ ọdịbendị, nzụlite na nkwenkwe dị iche iche. Onye ọ bụla na-agbakwunye na ọdịbendị BEI.
Enwere ihe karịrị asụsụ iri na abụọ ndị a na-asụ n'etiti ngalaba na ndị ọrụ anyị na ụmụ akwụkwọ si mba karịrị 12 na-amụ akwụkwọ na BEI. N'ezie, obodo anyị bụ Houston bụ agbụrụ dị iche iche agbụrụ dị na USA.
Na BEI, anyị na-eme nke ọma na ihe na-eme ka anyị niile pụọ iche.
Anyị kwenyere na ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara ụwa, ị ga-ebu ụzọ mata ndị bi na ya. BEI abụghị naanị ụlọ akwụkwọ - ọ bụ ibi ndụ.
Akụ mba ụwa raara onwe ya nye, yana ndị ọrụ anyị na-ekpo ọkụ, na-ege ntị, na-emepụta ebe na-akwado ma nabata ebe ị nwere ike ịga nke ọma. Etu ị mutara na ibi ndụ dị oke mkpa dịka ebe ị na-eme ya, onweghị ebe ọzọ dịka BEI.
Anyị ga - enyere gị aka ịchọta ụlọ ọzọ.
Enwere m obi ụtọ nke ukwuu BEI. Anọgidere m 3 mee njem. Ya na ha bu njem di egwu. Ndị nkuzi na ndị ọrụ niile, m zutere ebe ahụ, nyeere m aka nke ukwuu. Ha nyeere m aka, na-eduzi m n'akụkụ niile.
Ọ na - atọ m ụtọ ịmụ akwụkwọ na BEI. Ọ bụ nnukwu ụlọ akwụkwọ. Ozugbo ị batara ebe a, ị ga-abụ akụkụ nke nnukwu ezinụlọ mara mma. Ha nwere ndị ọrụ na-elebara anya ma nwee omume enyi. Ndị nkuzi nwere ahụmịhe dị ukwuu nwere ahụmịhe buru ibu. A bụ m nwa akwụkwọ Level 5, abịakwala m ebe a maka ọkwa 2. M nwere ike ikwu n'eziokwu na Bekee m emeela nke ọma. Yabụ, ọ bụrụ n'eziokwu na ịchọrọ ịmụ ma ọ bụ melite na nsonaazụ dị ịtụnanya, sonyere anyị.
Enwere m obi ụtọ na ahụmịhe m ebe a na BEI, ana m akwado ụlọ ọrụ a nke ukwuu, na-amalite site na ndị ọrụ ruo ndị nkụzi. Onye ọ bụla nwere ezigbo enyi ma nwee obi oma. Bianu, sonye BEI!